वैदेशिक लगानीमार्फत् सफा पैसा नेपाल आउनेमा गभर्नरको शंका ! - Laltin Media
Home»आर्थिक समाचार»वैदेशिक लगानीमार्फत् सफा पैसा नेपाल आउनेमा गभर्नरको शंका !
वैदेशिक लगानीमार्फत् सफा पैसा नेपाल आउनेमा गभर्नरको शंका !
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वैदेशिक लगानीका लागि ग्रेड चाहिने भन्दै हाम्रो देश ग्रेडमा नपर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर भने, “हाम्रो रेटिङ छैन । त्यसो भएका कारण हामीले राम्रो लगानी पाउँदैनौं । जंक लगानी आउँछ र सानोतिनो लगानी आउँछ ।”
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने ‘वर्ग’ भित्र नेपाल नरहेकाले सफा पैसा आउनेमा पनि उनले शंका व्यक्त गरे । देशको रेटिङ नभएको अवस्थामा राम्रो लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न नसकिने भन्दै अहिलेको अवस्थामा आउने लगानी ‘जंक’ भएको पनि उनको भनाइ छ ।
लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदाको अनुभव उल्लेख गर्दै उनले भने, “वैदेशिक लगानीकर्ताले नीतिमा स्थिरता खोज्छ । कानुनमा स्थिरता दिनु आवश्यक छ ।”
लगानी गर्दा एउटा नीति हुने र पछि परिवर्तन हुने हुँदा त्यो जोखिम वैदेशिक लगानीकर्ताले लिन नखोज्ने उनले बताए । “ऊ विभिन्न संस्थामा आएर देउसीभैलो खेल्न चाहन्न। एउटा कामका लागि एउटा संस्था अर्कोका लागि अर्को। जग्गा मिलाउन एकातिर, वनका लागि अर्कोतिर जान खोज्दैन,” गभर्नर अधिकारीले भने, “उसले एकै ठाउँमा सेवा चाहन्छ ।”
उनले निजी क्षेत्र र सरकारको मानसिकतामा पनि परिवर्तन रहेको आवश्यकता रहेको पनि बताए । खासगरी उनले निजी क्षेत्रले वैदेशिक लगानीबाट ‘थ्रेट’ ठान्दा समस्या भएको उनको बुझाई छ ।